हेर्दाहेर्दै छोराछोरी ख'रानी भए….. - Rising Dainik
हेर्दाहेर्दै छोराछोरी ख’रानी भए…..
April 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on हेर्दाहेर्दै छोराछोरी ख’रानी भए…..
प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका–३ रजवारामा एक गोठमा आ’गलागी हुँदा दुई बालबालिकाको मृ’त्यु भएको छ ।
आज बिहान करीब ९ बजे स्थानीय रमेश रानाको गोठमा आगलागी हुँदा उहाँको सात वर्षीय छोरा हिमाल राना र तीन वर्षीय छोरी चन्द्रकला रानाको मृ’त्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
घरमा अभिभावक नभएको बेला आगलागी भएको उहाँको भनाइ छ । अहिले प्रहरी घ’टनास्थल जादै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्यूठानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार योसँगै जिल्लामा आगोलागीबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ। चैत्रको दोश्रो सातादेखि जिल्लाका दर्जनौ सामुदायिक वनमा आ’गोलागीका ‘घ’टना भइरहेको डिभीजन वन कार्यालयले जनाएको हो।
त्यस्तै यस वर्षको वसन्तयाम शुरु भएसँगै हिमाली जिल्ला म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहका ४७ वटा सामुदायिक वनमा आ’गलागी हुँदा करिब १२ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा क्ष’ति पुगेको छ । वनमा आ’गलागी हुँदा साना तथा ठूला सयौँ रूखबिरुवा ज’ल्नुका साथै बहुमूल्य जडीबुटी, जङ्गली पशुपक्षी र अन्य वन पैदावार न’ष्ट भएका छन् ।
म्याग्दीमा हावाहुरीको मौसम शुरु भएसँगै सदरमुकाम बेनी तथा विभिन्न स्थानमा दिनहुँजसो आ’गलागीका घ’टना भइरहेका छन् । सामुदायिक वनमा १० हेक्टरदेखि १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा आ’गलागीले क्ष’ति पुगेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
केही दिनअघि मात्र बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटको गौश्वारा सामुदायिक वनको ६५ हेक्टर जङ्गल आ’गलागीबाट स’खाप भयो । सामुदायिक वनमा लागेको आ’गो नियन्त्रणमा लिन डिभिजन वन कार्यालयले ४३ सुरक्षाकर्मी स्थानीयवासी परिचालन गर्यो । स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीले दुई दिनसम्म खटिए पनि आगो निभाउन सकेनन् । आगलागीबाट सो वनका बहुमूल्य जडीबुटी, जङ्गली जनावर र वन पैदावार न’ष्ट भएका गौश्वाराका रत्नबम मल्लले बताए ।
यसैगरी पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानी सामुदायिक वनमा आ’गलागी हुँदा करिब ६० हेक्टर जङ्गलमा क्ष’ति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइ र भिरालो वनमा आगो लागेकाले निभाउन कठिन हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सामान्यतया सुक्खा र गर्मी मौसममा डढेलो बढी लाग्ने गरे पनि म्याग्दीमा हरियो घाँसको लोभमा पाखो डाँडा तथा जङ्गलमा आगो लगाउने गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालले बताए । “यस वर्ष म्याग्दीमा आगलागीबाट धेरै क्ष’ति भयो, मानवीय ला’परवाहीले आग’लागी हुने गरेको छ”, खनालले भन्नुभयो । उनका अनुसार मानवीय कारणबाट लगाउने गरिएको डढे’लोको असर लामो समयसम्म हुने भएकाले घाँसको लोभमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको न’ष्ट गर्ने गरिएको छ ।
सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ । आगलागीबाट एकातिर वनजङ्गल, जङ्गली जनावर र जडीबुटी न’ष्ट भएका छन् भने अर्कातिर मानव स्वास्थ्यमा समेत ग’म्भीर असर परेको वन तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।
ईश्वर पोखरेललाई यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिएर आफू विदा हुने ओलीको ‘प्लान’, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको आपत्ती !
कुकुरको घाटीमा लेखराज र सुँगुरको घाँटीमा रावलको नेमप्लेट !
रमेशको बिबाहमा रबि लामिछाने यसरी आएका थिए, रमेशले रबिलाई भे,ट्नासाथ भा,बुक हुदै यस्तो भने (भि,डियो सहित)
December 10, 2020 Ramash Kunwar